Kpọọ na Action Best Practices Infographic
Ndị folks na Litmus etinyela ihe omimi a na Mee na Emela Ihe Maka Oku Na-aga nke Ọma (CTA). Ọ bụghị naanị na ọ metụtara ịre ahịa email, n'agbanyeghị. Nnukwu CTA siri ike ịbịa zụta na weebụ - mana achọrọ! Ọ bụrụ na ị chọrọ nye uzo iji tinye aka nye ndi na agu akwukwo gi, Ikwesiri inwe oke oku ka ị rụọ ọrụ!
Site na Infographic: Mgbe ị na-eji email iji kpọtụrụ ndị na-agụ akwụkwọ gị, enwere ọtụtụ ụzọ itinye aka na mmụọ. Eserese, ederede, onyinye, eserese, na njikọ na-enyere aka ịkọwa ọdịiche nke mkpọsa gị na mmasị ndị debanyere aha, mana ime ka ha mepee email gị bụ naanị ọkara agha ahụ. Nzọụkwụ ọzọ bụ iji kpalie omume site na ịkpọ oku na ime ihe ike (CTA). Mgbe oge ruru ịhazi mkpọsa gị ọzọ, soro ndụmọdụ ndị a iji tinye CTA dị egwu na ozi ịntanetị gị n'ụzọ ziri ezi (ma zere ụzọ na-ezighi ezi).
Tags: kpọọ ka emekpọọ n’ọrụctaozi infographicinfographiclitmus